आँखामा लेन्सको प्रयोग कत्तिको उचित ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ टिप्स ∕ आँखामा लेन्सको प्रयोग कत्तिको उचित ?
आँखामा लेन्सको प्रयोग कत्तिको उचित ?
हेल्थ आवाज मंगलबार, २०७६ कात्तिक १९ गते, ०८:३० मा प्रकाशित
आँखा हाम्रो जीवनकै अभिन्न अंग हो । यो अन्य बाहिरी अंगहरुको तुलनामा निकै नै संवेदनशील अंग मानिन्छ । वर्तमान समयमा आँखालाई राम्रो र आफूले चाहेजस्तो रुप दिने प्रविधि हाल नेपालमा पनि भित्रिसकेको छ । यसैको एउटा उदाहरण मान्नुपर्छ—कन्ट्याक्ट लेन्स ।
अहिलेका मानिसहरु आफ्नो व्यक्तित्व र सौन्दर्यतामा निकै नै ख्याल राख्ने हुँदा आँखा कमजोर भएको अवस्थामा होस् वा आफ्नो सौन्दर्य बढाउनको लागि प्रायजसो धेरैले ‘कन्ट्याक्ट लेन्स’को प्रयोग गर्न थालेको पाइन्छ ।
चश्माको सट्टामा प्रयोग गरिने ‘कन्ट्याक्ट लेन्स’ले आँखाको पावर र सौन्दर्यलाई बढाउने कुरामा दुईमत छैन । त्यसैले चश्मा प्रयोग गर्न हिच्किचाउने र आँखाको सौन्दर्यतामा निखार ल्याउन व्यक्तिहरुले यसको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यसको उचित प्रयोगको अभावमा आँखाको सौन्दर्य र पावरको कुरा पर, यसभन्दा अघि यसले आँखामा नकरात्मक असर पु¥याउने सम्भावना प्रबल रहन्छ ।
आँखाको पावरको निम्ति चश्मा नै उचित रहेता पनि हाल धेरै व्यक्तिहरुले यसको प्रयोग गर्न थालेका छन् । तर, यसको उचित व्यवस्थापन गरी लगाउने हो भने यसबाट पुग्न सक्ने हानीबाट जोगिन सक्छ । त्यसकारण आँखामा लेन्सको प्रयोग गर्दा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
लेन्स लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा:
डाक्टरको सल्लाह अनुसार मात्रै लेन्सको प्रयोग गर्ने
लेन्सको प्रयोगको समयमा धुलो धुवाँमा नहिड्ने
जथाभावी लेन्सको प्रयोग नगर्ने
अरुको लेन्सको प्रयोग नगर्ने
राती सुत्दा लेन्स अनिवार्य रुपमा निकाल्ने
डाक्टरको सल्लाहबिना कुनै पनि किसिमको कस्मेटिक लेन्सको प्रयोग नगर्ने ।
प्रस्तुती : सृजना मगर